"देश नै बिखण्डन गर्ने प्रस्तावविरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त आन्दोलित हुनु जरुरी छ" - Asian Samachar
“देश नै बिखण्डन गर्ने प्रस्तावविरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त आन्दोलित हुनु जरुरी छ”
Asian Samachar सोमवार, पुस १८, २०७३ (11 months ago) अन्तर्वार्ता
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संसोधन विधेयकको चर्को विरोध गर्दै सदन र सडक संघर्षमा छ । एमालेकै नेतृत्वमा अन्य प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरु समेतको सहभागितामा पुस २२ गते खुल्लामंचमा विरोधसभा हुँदैछ । सरकारका विद्यमान काम कारवाही, नेकपा एमालेको निरन्तरको आन्दोलन र अनेरास्ववियुको आन्तरिक जीवनमा केन्द्रित रहेर अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामासंग एसियन समाचारका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी-
केही दिन अघिमात्रै तपाई भारत भ्रमण गरेर फर्किनुभयो, भ्रमणको खास उद्देश्य के थियो ?
हो,अखिलको तर्फबाट म लगायत नेविसंघ, क्रान्तिकारी, तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्ट र राप्रवि संघका नेता साथीहरु भारत गएर फर्किएका छौ । हामी त्यहाँ आयोजित अखिल भारत विद्यार्थी परिषदको राष्ट्रिय महाधिवेशमा सहभागी हुन गएका थियौं । अत्यन्तै सभ्य र भव्य ढंगबाट निकै मर्यादित रुपमा चलेको उक्त अधिवेशनमा भारतका रक्षामन्त्री प्रमुख अतिथि रहेका थिए । उक्त कायक्रममा हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धका ऐतिहासिक आयामहरुमाथि विमर्श गयौँ ।
त्यो अधिवेशन बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो की ?
त्यो अधिवेशसंगै हामी नेपालबाट गएका विद्यार्थी नेताहरुले अखिल भारत विद्यार्थी परिषदका पदाधिकारीहरुसंग शिक्षाका विभिन्न सन्दर्भमा छलफल गयौं । त्यस्तै दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतावासको आयोजनामा हामी र काग्रेस आई तथा विजेपीका विद्यार्थी नेताहरुसंग भएको छुट्टै अन्र्तक्रियामा मैले नेपालको मात्रै होइन भारतको स्वतन्त्रताको लागि पनि कैयौं नेपाली यूवाहरुले इतिहासमा अग्रेजसंगको लँडाइमा गोली समेत खानुपरेको उहाहरुलाई स्मरण गराएँ ।
भारत र नेपालबीचको बिगतदेखिको सम्बन्धलाई आजभोलि भारतले नेपाललाई गर्ने व्यवहारबाट आम नेपाली युवाहरु आक्रोशित बन्दै गइरहेकोप्रति भारत सजक हुनुपर्नेमा मैले उहाँहरुको ध्यान आकर्षण गराएँ । खासगरि हामीले सम्पूर्ण नेपाली युवाहरुको आवाज भारतीय युवा नेताहरुलाई सुनाएँ ।
एक जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वको नजरमा देशको वर्तमान घटनाक्रमलाई कसरी नियाली रहनुभएको छ ?
नेपालको हालको राजनैतिक अवस्था निकै संवेदनशील देखिन्छ । लामो समयदेखि राजनैतिक सहमति हुन नसकी संविधान कार्यान्वयनको सवाल ओझेलमा परेको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार मधेसवादी दलहरुको आग्रहमा आएको देश विखण्डनको संशोधन विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गराउने राष्ट्रघातमा सामेल हुन खोज्दैछ ।
हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले उठाएका एजेन्डा यथार्थपरक हुँदाहुँदै सरकारवादी दलहरु माओवादी र काग्रेस लिंढेढिपी गर्दैछन् । यो राजनीतिका लागि शुभ संकेत पटक्कै होइन । एमालेको विरोध गर्न पाइन्छ तर सही एजेन्डाको विरोध गर्न पाइदैन । यसकारण देश नै विखण्डन गर्ने मनसायमा आएको यस्तो प्रस्तावका विरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्तहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संसोधन विधेयकका विरुद्ध थालनी गरिएको संयूक्त विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भयो भनिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन, हाम्रो संयूक्त विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन अहिलेसम्म एकमना एकताकासाथ अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रघाती संसोधन विधेयकका विरुद्ध हामीले कोणसभा ,सिटु्ठी जुलुस , विद्यार्थी वहस ,सडक कविता वाचन ,बालुवाटार घेराउलगायत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता रचनात्मक आन्दोलन गरेका छौं । यसरी गरिएको रचनात्मक विरोधलाई कमजोरीको रुपमा नलिन सरकारसंग अनुरोध छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा संयूक्त विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन जारी छ ।
अनेरास्ववियू’भित्र मातहतका कमिटिमा सर्कुलर पठाउने होडवाजी चलिरहनुलाई रोक्न सक्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?
तपाईले यो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । हो, हाम्रो संगठनमा मनपरी ढंगबाट सर्कुलर ल्याइएका छन् । वास्तवमा संगठनको महासचिवले ल्याएको सर्कुलर नै आधिकारिक हो । तर, त्यसमा पनि केही त्रुटि देखिएका छन् । त्यसैलाई मिलाएर ,सच्चाएर सबैको चित्त बुझने गरि सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्कुलर फेरि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । आफुलाई चित्त बुझेन भन्दैमा सबैले सर्कुलर बाड्दै हिड्ने हो भने संगठन कसरी चल्छ ? यस्ता व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृतिहरुलाई निस्तेज पारेर विवाद समाधान छिट्टै गरिने छ ।
स्ववियू निर्वाचनको अन्यौलता के हो, घोषणा गरिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ त ?
यसपाली स्ववियू निर्वाचन हुन्छ । सबै संगठन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका सबै सरोकार वालाहरुको जोड जसरी पनि स्ववियू निर्वाचन गराउने भन्ने नै छ । अनरास्ववियूको सन्दर्भमा सोध्नुहुन्छ भने हामी उमेर किटान गर्दा पनि र नगर्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने हो चुनाव हामी नै जित्ने भएकाले हामीलाई यसबारे कुनै मतलब पनि छैन । तर, विद्यार्थी संगठनहरुकोबीचमा खेलेर विश्वविद्यालयले पहिले जस्तो हल्का रुपमा स्ववियू चुनावलाई नलिदेओस् ।
अन्त्यमा , तपाई अखिलको अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि सम्पन्न भएका गतिविधिबारे के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अवश्य, म अध्यक्ष बनिसकेपछि अखिलले ऐतिहासिक कामहरु गरेको छ । हामीले विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था सरकारको नीतिमा राख्न सफल भएका छौं । प्राकृतिक विपत्तीदेखि विभिन्न समस्यामा परेका तिलाठीदेखि प्युठानसम्मका विभिन्न बिपत्तिमा परेकाहरुलाई राहत वितरण गयौं ।
करिब २०० भन्दा बढि सरकारी स्कूलका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निशूल्क छात्रवृति दिलाउने काम गरियो । ९ जना एसएलसी उतिर्ण गरेका छात्राहरुलाई अखिलकै पहलमा होस्टेलमा राखेर निःशूल्क पढाउने व्यवस्था मिलाएका छौ । अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी संगठनसंगको सम्बन्ध वृद्धि भएको । त्यस्तै ७ जना श्रमिकका छोराछोरीलाई १ देखि १० सम्म निशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, विडम्वना भन्नु पर्छ की मैले निकै मेहनत गर्दा पनि आफनै संगठनको व्यक्तिकेन्द्रित र गुटगत प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न सकिरहेको छैन ।
अबको मेरो पहिलो एजेन्डा भनेको संगठनभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्नु हुनेछ । यो बाहेक आजसम्मका विद्यार्थी शहीदहरुको सम्झनामा शहीदपार्क निर्माण गर्ने, राजधानीको रत्नपार्कमा विद्यार्थी वेलफेयर सेन्टर निर्माण गर्ने र सार्वजनिक क्याम्पस तथा विद्यालयको शैक्षिकस्तर उन्नतीका लागि रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने र अनुसन्धान अभियान चलाउने योजना छ ।